Sh. Nuur Baaruud oo sheegay in Miino loo dhigay uu ka badbaaday
Home Somali News Sh. Nuur Baaruud oo sheegay in Miino loo dhigay uu ka badbaaday
Sheekh Nuur Baruud Gurxan, oo ah Guddoomiyaha Guddiiga Gurmadka abaaraha Qaran, ayaa sheegay ineey ka badbaadeen qarax la doonayay in lagu qaarijyo oo shalay lagula beegsaday deegaanka Sarakuusta ee duleedka Muqdisho.
Gaadiid ay la socdeen sheekha iyo masuuliyiin kale ayaa shalay qarax Miino lagula eegtay inta u dhaxeeysa Sarakuusta iyo Garas-baaleey, waxaana uu bur bur xoogan qaraxaas kasoo gaaray Gaari ay wateen.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, oo markii ay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho warbaahinta lahadlay, ayaa sheegay ineey u socdeen barakacayaasha ku sugan duleedka Muqdisho.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa shacabka Soomaaliyeed...